Manampia Y! Mipetraha amin'ny Sidebaranao!
Zoma, Febroary 8, 2008 Zoma, Febroary 8, 2008 Douglas Karr
Tena faly aho momba Y! Live - teknolojia mahafinaritra! Ka nanapa-kevitra ny handroso aho ary apetrakao eo amin'ny sisintaniko! Rehefa mandefa fandaharana aho dia azonao atao ny mahita ahy miasa amin'ny solosaina finday ao amin'ny sisilan-tsisiko. Ahoana no nataoko? Nandany asa kely ilay izy, fa hitako ihany. Ny sakana lehibe indrindra tokony hialana dia ny tsy fisian'ny URL an'ny antotan-taratasin'i Yahoo! Manondro ny tena fandefasana azy!